Florida Marijuana Laws - Marijuana fahazoan-dàlana ao amin'ny fanjakan'ny Sunshine
Florida Lawner mpisolovava
Mpisolovava amin'ny rongony rongony dia manazava ny lalàna Marijuana ara-pahasalamana any Florida
Henoy izany ao amin'ny PodCast na Jereo ny YouTube ao amin'ny Florida Cannabis Laws ho an'ny mpisolovava rongony Florida izay hadinadininay - tsidiho Atoa Cannabis Law, Dustin Robinson, ao amin'ny tranonkalany: Atoa Cannabislaw.com
Sata momba ny lalàn'i Florida Cannabis / Marijuana
"Lalàna rongony Florida" mijaly noho ny fahanteran'ny olona antitra sy mpandala ny nentin-drazana izay mbola mitazona stigma tsy ara-drariny momba ny rongony, izay antsoina hoe marijuana ara-dalàna ao amin'ny fanjakan'ny Florida. Florida dia manana programa marijuana ara-pitsaboana matanjaka miaraka amin'ny marary 300,000 eo ho eo. Ny ara-dalàna ny marijuana tanteraka any Florida dia mety hipoitra avy amin'ny laharam-pifidianana iray rehefa tonga ny lalàna marijuana ara-pitsaboana - tadiavo ny 2022 ho an'ny vato mifidy ny ara-dalàna ny marijuana any Florida.
FIVAVAHANA MISY: Ahoana no fanamafisana ny mpahay lalàna hozatra amin'ny asanao
Araka ny lalàna ankehitriny ao Florida, na ny mariage kely aza dia tsy ara-dalàna eto amin'ity fanjakana ity. Ny tompon'andraikitra dia milaza fa ny fananana rongony 20 grama na latsaky ny rongony dia fandikan-dalàna diso. Ireto ny lalànan'ny fitsipika mifehy ny cannabis ankehitriny.
Hanao ahoana ny fiovana amin'ny ho avy, ary ho afaka hahita fiovan'ny fitsipika cannabis Florida isika? Amin'izao fotoana izao dia afaka hitantsika ny tantaran'ny lalàna misy otrikaretina ao Florida. Voarindra ny rongony ara-pitsaboana eto amin'ity fanjakana ity, raha ny fanararaotana amin'ny alàlan'ny fialam-boly any Florida dia mbola ao anatin'ny fanontaniana ihany.
Inona avy ireo lalàna Cannabis any Florida ankehitriny?
Raha manana rongony 20 grama na latsaky ny rongony iray ianao, dia mety hasaina handoa lamandy lafo indrindra $ 1,000 20. Afaka mahazo sazy an-tranomaizina faran'ny herintaona ao amin'ny fonja an-toerana. Ity karazana hadisoana ity dia tsy dia matotra loatra noho ny felony. Mba ho mahafeno fepetra amin'ny felony dia tsy maintsy milanja rongony mihoatra ny XNUMX grama ianao.
Lehibe ny vokatr'izany raha mivarotra rongony ianao. Izany dia mihatra amin'ny faritra ao anatin'ny 1,000 metatra ao amin'ny sekoly iray, oniversite, zaridaina na faritra iray hafa azo saziana amin'ny fanamelohana. Afaka mahazo $ 10,000 be indrindra ianao ary fehezanteny farany 15 taona. Ireo no fitsipika ankehitriny momba ny fananana sy ny fanaterana rongony any Florida.
Eo ambany fanitsiana goavana ny fitsipika, indrindra noho ny lisitry ny volavolan-dalàna izay mety hanova ny indostrian'ny rongony Florida. Ny Fitsarana Tampony tao Florida dia afaka nanapa-kevitra ny hanova ny fitsipika mifehy ny marijuana ho any Florida amin'ny faran'ny taona 2020.
Tamin'ny taona 2016, 70% amin'ireo mpifidy tany Florida no nifidy ho ara-dalàna rongony ara-pitsaboana ho anisan'ireo fanitsiana ny lalàmpanorenana. Tamin'ny faran'ny taona 2017 dia nohamarinina tamin'ny alàlan'ny mari-pahaizana rongony, pills, menaka, ary voaloboka ny rongony ara-pitsaboana. Dingana iray lehibe ho an'ireo marary Florida izay te hampiasa rongony ara-pitsaboana ho an'ny toe-pahasalamana samihafa.
Ny fambolena hemp any Florida dia lasa fenitra amin'ny indostria. Ity dia ampahany amin'ny fandaharan'asan'ny Departemantan'ny Fambolena sy ny mpanjifa tamin'ny taona 2019. Nahatonga ilay antsoina hoe "hazakazaka maintso" ao amin'ity fanjakana ity izay niteraka safidy maro ho an'ny orinasa madinika sy salantsalany.
Ankehitriny, tamin'ny 2020, ny volavolan-dalàna nambara dia manohana ny hetsika ho an'ny ara-dalàna marijuana. Manana mpanohana be dia be ity hetsika ity ary efa hanova tanteraka ny lalàna ofisialy.
Iza amin'ireo lalàna rongony any Florida no hiova amin'ny 2020?
Betsaka ny vinavina fa ny fampiasana ny marijuana amin'ny Florida dia mety hitranga amin'ny 2020. Ity dia fanambarana avy amin'ny hetsika ofisialy Florida rongony. Nilaza izy ireo fa ny fanararaotana rongony dia mety hanova ny fomba fijery manontolo ny orinasa.
Orinasa maro no hanokatra ny dispensaries sy ny fivarotana izay azon'ny vokatra novidiana hatao. Hampitombo ny fahafaha-miasa ho an'ny tantsaha sy ny mpamboly ary ny mpivarotra izany.
Mandritra izany fotoana izany, mandritra ny 2020, ny fampiasana mariage dia mety ho azon'ny veterana. Ireo mpampiasa ny fahazoan-dàlana dia afaka mampitombo, manamboatra, hizaha toetra ary hivarotra ireo vokatra tsy misy ny middlemen. Hanitatra ny lisitr'ireo aretina izay azo atao amin'ny fitsaboana rongony. Ary ny sazy amin'izao fotoana izao ho an'ny fananana rongony dia ho jeren'ny fitsarana.
Ireo fanovana rehetra ireo dia ho tonga amin'ny 2020. Ny fitsipika vaovao cannabis Florida dia ho fiovana lehibe ho an'ny mponina any Florida izay te hampiasa ara-dalàna rongony.
Ny haingana kokoa ny tsaratsara kokoa
Ny fitsipiky ny fanarahan-dalàna any Florida dia hitondra fiovana lehibe amin'ny fomba fijerena rongony amin'ny ankapobeny. Amin'izao fotoana izao, 11 dia ny rongony rongony ara-dalàna ho an'ny olon-dehibe mihoatra ny 21 taona. Marijuana no ara-pitsaboana amin'ny fanjakana 33.
Amin'ny ho avy, isika dia hahita maso ny fitomboan'ny taham-pamatsiana marijuana amin'ny ankapobeny. Indrindra amin'ireo marary mampiasa rongony ho an'ny tanjona fitsaboana. Afaka mampiasa rongony hiaina amin'ny fialamboly ireo mponin'i Florida raha misy ny faktiora rehetra amin'ny 2020.
Manokatra ny vavahadiny i Florida amin'ny fanovana lehibe amin'ny indostrian'ny rongony, ary tsy mitsaha-mitombo ny fironana. Ny kolontsaina sy ny foto-kevitra ary ny fizarana dia tokony hitondra fotoana lehibe ho an'ny orinasa sy orinasa kely. Noho ny fahazoan-dàlana mari-pahaizana an-tsokosoko any Florida dia ho afaka hampiasa sy hividy rongony koa isika. Ity dia dingana lehibe handroso amin'ny fanovana ny lalàn'i cannabis Florida.
Androany isika dia hiresaka momba ny lalàna rongony Florida. Salama daholo, Tom Howard no anarako. Raha mila zavatra ianao dia azonao atao ny mampiasa Google Cannabis Lawyer ary ho hitanao aho. Saingy androany dia manana fizarana manokana isika. Hiresaka momba ny lalàna rongony Florida miaraka amin'i Dustin Robinson izahay. Dustin, misaotra anao nanatevin-daharana anay.
Dustin Robinson - Mpisolovava rongony ambony any Florida
Ie, fantatrao ny anjara asany. Soa ihany isika fa nanao zavatra tsara lavitra noho ny teo aloha. Na izany na tsy izany, izany no mitranga rehefa manana fampisehoana amoron-tsiraka ianao. Avy aiza i Dustin?
Eto Florida aho. Any Florida atsimo talaky masoandro aho. Tsara ny toetrandro eto.
Ka tsy manao pataloha milahatra volom-borona toa ahy ianao eto satria toy ny 25 degre ety ivelany.
Ie, tsia, tsara tarehy ivelany izy io. Tao anaty sambo aho omaly. Andro fiasana androany. Ny tara-masoandro tsara tarehy avy eo am-baravarankely.
Inona avy ireo karazan-javatra izay iasahanao ao amin'ny cannabis Florida?
Inona no mitranga amin'ny lalàna rongony any Florida?
Manana zavatra maro samihafa eto Florida izahay, mazava ho azy fa tsy manisa ireo zavatra mitranga eo amin'ny lafin'ny hemp. Manana entana be dia be izahay eo amin'ny lafiny marijuana. Tantara vetivety fotsiny eto Florida. Nahazo fahazoan-dàlana maromaro izahay, ilay antsoinay MMTC no midina eto, Toeram-pitsaboana rongony ara-pitsaboana. Ireo dia fahazoan-dàlana mitambatra mifindra eto Florida. Nomena alalana tamin'ny alàlan'ny Ministeran'ny fahasalamana izy ireo. Ary avy eo taorian'izany dia nisy ny fanarahan-dalàna maro tany Florida. Koa raha ny marina, izao dia manana lisansa 22 izahay ary ny ankamaroan'ireo fahazoan-dàlana ireo dia nomena tamin'ny alàlan'ny fifanarahana fametrahana, eo ivelan'ny [crosstalk 00:01:47], hoy ihany.
Mahaliana izany, satria eto Illinois izy ireo dia mieritreritra ny fomba tokony hitondran'izy ireo teti-bola hitoriana ny fanjakana ary manana fahazoan-dàlana fanampiny miorina amin'ny faratampon'ny lalàna izy ireo. Ka manontany tena aho raha ho be ny fahazoan-dàlana hipetraka amin'ny fahazoan-dàlana?
Ie, tsara izany, miteny aho fa ny fanjakana izay manao fahazoan-dàlana dia mila manolotra loharanom-pahalalana manan-danja amin'ny resaka litigate. Fantatro fa vao nanambara ireo nandresy azy ireo i Missouri. Niara-niasa tamina ekipa roa momba ny fampiharana Missouri sy ny mpanoratra fampiharana tsara aho, rehefa nandrafitra izany izy ireo dia nandrafitra izany mba hahafahan'izy ireo manangana tena hahafahan'izy ireo mitarika ny hetsika raha toa ka aza mahazo licence. Ka tetika ampiasain'ny olona maro tokoa izany. Ary eto Florida dia nomena lanja fatratra ny fahazoan-dàlana. Midika izany fa manana-
Fampidirana mitsangana ny orinasa rongony any Florida
Yeah. Ka azonao… Ny vola amidy dia mitentina $ 60 tapitrisa. Izay ilay izy, tsy misy trano sy tany misy asa. Ka noho izany be dia be izany, tsy mampaninona ny olona ny mandoa vola $ 1 tapitrisa ho an'ny mpisolovava mba hiezahana hahazo izany fahazoan-dàlana 50 tapitrisa $ izany. Raha any amin'ny fanjakana hafa kosa dia mety tsy ho avo loatra ny sandan'ny fahazoan-dàlana. Raha manana ny sombin-taratasy ianao, andao lazaina, $ 500,000 na iray tapitrisa, dia mety tsy hirona loatra amin'ny fandoavana vola amin'ny mpisolovava an-jatony maro momba izany ianao. Fa rehefa 50 tapitrisa ny fahazoan-dàlana dia toy ny hoe: “Fantatrao izay, handray azy aho.” Ary indraindray ny olon-kafa dia mamatsy ara-bola an'io fitoriana io izay mahita fotoana mety-
Aza miala. Ary tsy izany… Tsia, tsy fahamarinana izany. Inona no rahoviana, miandry… champerty izay champerty ary indrisy fa hianarantsika fepetra ara-dalàna lehibe. Ka ny olona dia, tsy mahazo manao an'izany ianao. Ara-dalàna ny zavatra iray, champerty ary fikojakojana. Raha ny teôria dia tsy tokony hahavita Champerty ianao toy ny fitsabahan'ny antoko lavitra mba hampirisihana ny fitoriana. Izany no fikolokoloana ity. Saingy io karazan-javatra io ihany raha misy olon-kafa izay tsy ilay olona mifandraika amin'ny fitoriana no liana ara-bola amin'izany. Ka heveriko fa avelan'izy ireo any Florida ny champerty?
Tsy mbola henoko mihitsy io terminology io. Fa ny tiako holazaina dia, amin'ny faran'ny andro, dia matetika misy olona manana fitoriana ary tsy afaka mamatsy vola azy ireo izy ireo ary misy olon-kafa tonga hamatsy ara-bola ho takalon'ny zavatra iray. Ka eny, heveriko fa ny champerty dia mety mifantoka kokoa amin'ity-
Oh, avy amin'ny vanim-potoana feudal-
Saingy mieritreritra ianao fa hisy ny tsy mety raha mivoaka ianao ary manandrana mitady olona hametraka fitoriana? Izay angamba no kendrena fa ity dia ohatra iray irian'ny olona hametraka fitoriana. Tsy nanana renivohitra nandany vola 1 tapitrisa $ tamin'io fotsiny izy ireo. Niditra izy ireo ary nahita mpamatsy vola vonona ny hamatsy ara-bola ho takalon'ny fitoviana vola. Ary avy eo nahazo fahazoan-dàlana izy ireo ary afaka namadika izany tamin'ny $ 55, $ 60 tapitrisa. Mazava ho azy izao fa namoaka izy ireo… Vao tsy ela akory izay izay no namoaka fahazoan-dàlana vaovao valo tamin'ny alàlan'ny fandaminana. Izy ireo no antsoina hoe tondro iray. Ireo dia olona nahazo isa tao anatin'ny teboka iray tamin'ny fizotran'ny fampiharana voalohany. Ka amin'izao fotoana izao dia manana manana fahazoan-dàlana valo amin'ireo 22 izay vaovao be izahay ary manandrana manangona renivohitra hitantanana orinasa miharo volo. [crosstalk 00:05:08] 20 tapitrisa dolara eo ny vidiny.
Rehefa miteny ianao hoe mitsangana, dia midika izany fa mihalehibe izy ireo, mitahiry, mandrindra, ao anaty iray daholo, sa tsy izany? Ary izany no firafitra ho an'i Florida.
Ie, ka ny adala any Florida dia tsy maintsy ataon'izy ireo, tsy maintsy mitombo izy ireo, manamboatra, manaparitaka ary manome. Ary tsy afaka miala amin'izany rehetra izany ianao. Ka tsy hoe misy orinasam-panaterana manao izany. Ny orinasa tsirairay dia manana serivisy fanaterana azy ireo manokana. Ary azonao an-tsaina izany fa lasa tsy mahomby raha manana mpifanila trano roa mifanila eo akaikinao ianao. Ny iray dia manafatra amin'ny dispensary iray, ny iray kosa manafatra amin'ny dispensary iray hafa ary nahazo fiara roa mitondra fiara ianao hanaterana akaiky. Mety hisy dikany kokoa raha misy serivisy fitaterana entana izay afaka naka avy tao amin'ireo dispensary roa ireo tao anaty fiara iray. Ary noho izany dia misy ny tsy fahombiazana ary misy volavolan-dalàna roa amin'ity fivoriana manaraka ho an'ny mpanao lalàna ity ary niezaka namantatra izy ireo. Misy tokoa ny fitsarana avo any Florida, noho izany dia heverin'ny fitsarana ambany fa mifanohitra amin'ny lalàm-panorenanay Florida izany firafitra izany.
Inona no nataon'i Florida, satria andao hiresaka ny fomba nahatongavan'i Florida ho fanjakana marijuana ara-pitsaboana.
Nanomboka ny marijuana ara-pahasalamana tany Florida
Florida tany aloha dia manana lalàm-panorenana izay zahana ihany, ambany be dia be ny marijuana THC
Toa an'i Virginia Andrefana izany. Izahay dia niresaka momba ny any aoriana, West Virginia, tsy mahazo voninkazo ianao, tsy afaka mahazo vape akory ianao, tsy misy zavatra azo setroka ary mila manodina. Izany ve no nanombohan'i Florida? Tsy navela hanana voninkazo ianao?
Yeah. Ka, Florida, tena miasa amina rindrambaiko West Virginia aho izao ary eny, izany no fijerin'i West Virginia. Ary eny, nanomboka tamin'ny fatra tsotra sy tsotra ary ambany ihany i Florida. Fa ny zavatra niainantsika tamin'ny ankapobeny dia ny, nisy ny fanitsiana ny lalàm-panorenana. Ny fanitsiana ny lalàm-panorenana dia nilaza fa ireo MMTC, Ivon-toeram-pitsaboana marijuana ara-pahasalamana dia afaka mitombo, manodina, manome na manatitra. Ka io teny io na tao amin'ny lalàm-panorenanay Florida. Ary avy eo tamin'ny 2017 rehefa nandeha nametraka io fanitsiana lalàm-panorenana io ilay mpanao lalàna dia nantsoin'izy ireo hoe… Nilaza izy ireo fa nitombo io, nizotra, nanaparitaka ary nanatitra, namorona ity orinasam-pikambana mitambatra ity izay tokony hanao azy rehetra.
Ny tsy fitovizan'ny mpampifandray sy ny mandatory amin'ny permisive. Ny iray amin'izy ireo dia mpampifandray ary ny iray kosa, tsy azoko antoka hoe inona no antsoin'izy ireo.
Ny lalàna mifehy / Conjapter sy Florida
Ie, nanontaniana be aho momba ity raharaham-pitsarana ity ary [tsy henoina 00:07:38] sy ny toa ny olona iray, “Oh, sarotra loatra izany. Tsy mila mahafantatra ny ara-dalàna aho. ” Toy ny hoe, “Tsia, tsotra be izany. Ny maha samy hafa an na sy. Ny lalàm-panorenana dia mampiasa ny teny na izay midika fa afaka mamboly, mandrindra, manome na manatitra. Ny lalàna Florida dia niditra ary nampiasa ny teny ary, midika izany fa ny orinasa dia mila manao ireo zavatra rehetra ireo. " Ka amin'izao fotoana izao dia mandray an-tanana an'io raharaha io ny fitsarana avo any Florida ary manondro azy ireo ny famantarana rehetra manamafy izany didim-pitsarana izany, izay midika fa ho tapaka ny fampidirana mitsivalana ary tokony hiverina izy ireo ary hamorona rafitra marindrano eto.
Izy io dia ny mpampitohy mifanohitra amin'ny fampiraisana. Ka ny konjunktiva dia ary, ary ny fampifangaroana dia. Tsia tiako izany. Izany dia toy ny, satria io no fotony. Miresaka momba ny fanarahan-dalàna rongony amin'ny fomba fijery ara-dalàna mifanohitra amin'ny fomba fijery politika. Saingy misy politika marobe izay mandeha amin'izany resaka izany. Ary toy izany koa any Florida na any Illinois, dia hiatrika fitsarana izahay ary miady amin'ny hevitry ny teny ianao na, Midika izany fa ara-bakiteny izany. Ary rehefa miteny izy ireo hoe, “Na,” dia heverina fa ao anatin'izany fampifangaroana izany any. Ary noho izany amin'ny fampifangaroana azy io ary avy eo amin'ny alàlan'ny fananganana $ 100,000 fanampiny, $ 250,000 amin'ny fanenjehana ny fanjakana mba hahafahanao manefa lisansa. Izany dia nametraka ny vidin'ny fahazoan-dàlana rongony, tsy any amin'ny State of Florida ihany, fa na aiza na aiza avo kokoa noho ny tokony ho izy na mety hisy.
Ie, eny, eny. Avo dia avo tokoa ireo fahazoan-dàlana ary marina tokoa, ny sampan-draharahan'ny fahasalamana dia mandany vola an-taonina amin'ny fitoriana izany ary tsy manana loharanom-bola hanaovana izany izy ireo. Ary miala amin'ny teti-bolan'izy ireo ihany koa ny fampiharana ireo fepetra tena tokony harahin'ny MMTC. Ary noho izany dia tsy misy fampiharana araka ny tokony ho izy, satria tsy manana ny enti-manana ny DOH.
Tsy izany. Ny fahafantarako fa misy mpilalao efatra fotsiny any Florida. Marina ve izany? Toy ny firy-
Ny fahazoan-dàlana amin'ny mari-pahaizana an-tserasera Florida tany am-boalohany
Ka ny fahazoan-dàlana tany am-boalohany dia toy ny, heveriko fa nahazo alalana mpilalao efatra na dimy izy ireo. Ka nanomboka fanombohana lehibe teo an-tsena ry zalahy. Ary avy eo taorian'izay dia nahazo alalana izy ireo, ary manana fahazoan-dàlana 22 isika izao. Amin'izao fotoana izao dia misy valo na sivy eo ho eo izay tena miasa. Amin'ireo valo na sivy ireo, efatra na dimy amin'izy ireo no tena manjakazaka, satria nanana lohavola lehibe izy ireo.
Ka tsy misy satroka, ka ny dispensary sy ny statut, hoy izy ireo dia voafetra ho 25 dispensaries. Ka tsy afaka nitombo, nikirakira ary nanaparitaka ary tsy toy ny tany Illinois izy ireo izay nikatona noho ny haben'ny asa tanana 5,000 25 metatra toradroa. Any Florida, tsy voafehinao amin'ny fitomboanao. Tsy sakanana amin'ny fikarakaranao ianao. Ary amin'ny fizarana dia voafetra amin'ny toerana 100,000 ianao. Fa rehefa tafakatra amin'ny…… Rehefa tonga any… Isaky ny marary 300,000, dia mahazo dispensera dimy hafa. Ka amin'izao fotoana izao dia marary 25 mahery isika. Ka ny tsirairay amin'ireto orinasam-pikambana mitsivalana ireto dia mety manana 40 miampy XNUMX eo ho eo amin'ny dispensaries.
Ary nisy ihany koa ny fitoriana izay mamela ny sasany amin'ireo manana fahazoan-dàlana hanokatra ireo dispensary aza. Ka izany no antony niresahan'izy ireo dia fahazoan-dàlana lehibe. Ary mazava ho azy fa vola be dia be ny mampitombo, tsy ny fanodinana ihany, fa ny manandrana manokatra ireo toerana anaovana izany rehetra izany.
Toa ny fanjakana Florida dia nanome ny olona efatra ny tombony. Four-
Tsy olona efatra izy io, fa lehilahy efatra Florida. Ary tsy ireo olona efatra ireo avy eo. Tsy hoe misy bandy efatra mipetraka eo, mipetraka amin'ny 20 tapitrisa avy ary samy manipy fotsiny izy ireo. Ireo dia tokony ho fikambanana niangona ary nametraka renivohitra sy talenta marobe, satria raha tsy izany dia ' Tsy ho afaka hitombo haingana toy izany aho.
Eny, ny tiako holazaina dia ny fanitsiana izany, tsy ny lehilahy Florida aza. Ary izany no mahasosotra ny olona maro any Florida dia ny fanomezana fahazoan-dàlana ho an'ny tantsaha eto Florida ary misy ny fepetra takiana momba ny fitantananany akanin-jaza mandritra ny 30 taona. Saingy rehefa nahazo izany fahazoan-dàlana izany izy ireo dia namidy tamin'ny MSO lehibe. Ka amin'izao fotoana izao, Florida, ny ankamaroan'ny fahazoan-dàlana miasa dia an'ny MSO be dia be ary tsy misy ifandraisany. Tsy lehilahy Florida izy ireo, tsy olona Florida. Tsy orinasa Florida akory izy ireo. Orinasa goavambe fotsiny izy ireo. Saingy fantatrao, ho fiarovana ny tantsaha, betsaka ny olona manome kamo kely an'ireo tantsaha ireo amin'ny fivarotana ireo fahazoan-dàlana ireo. Saingy ny tena zava-misy dia ny fahasarotan'ny banky tahaka ny misy azy ary miaraka amin'ny fampidirana azy mitsivalana ary lafo loatra ho lasa opérance, ireo tantsaha ireo, ny sasany amin'izy ireo dia mety tantsaha manankarena, mety manana iray tapitrisa na roa tapitrisa izy ireo. tsy manana 20 tapitrisa.
Ka tsy manan-tsafidy izy ireo. Tsy afaka mandeha any amin'ny banky izy ireo haka indram-bola. Tena tsy manan-tsafidy izy ireo fa ny mivarotra izany amin'ny fananana ara-bola. Ary izany no nataon'izy ireo. Ka tsy heveriko fa hadisoan'ny tantsaha izany. Heveriko fa ny rafitra iray manontolo dia nisy lesoka kely. Saingy fantatrao izay, amin'ny faran'ny andro dia rafitra vaovao io ary mieritreritra aho fa tena manao asa tsara i Florida. Heveriko fa ny fampidirana mitsangana dia nanampy tamin'ny olana maro samihafa. Saingy heveriko fa isika dia amin'ny fotoana izay tsy maintsy nanovana ny marindrano.
Heverinao ve… Fa ny tiako holazaina, satria raha tsy miova miolaka izy ireo na manome fotoana bebe kokoa ho anao ry zalahy, ireo olona efatra ireo dia hijery fotsiny ireo mpamboly tsara hividy azy avy eo ary mividy azy ireo. Ny tiako holazaina dia izy ireo, raha tsy misy kapaoty, satria eto Washington dia manana-
Amin'ny ankapobeny, inona no lazainao, tsy toy ny any Illinois izay ananantsika ireto satroka ireto momba ny fihazonana fahazoan-dàlana ka tsy misy afaka manjaka amin'ny indostria. Any Florida dia toa izany, ary toa any Washington no anananao ny olana mifanohitra amin'izany izay misy mpilalao lehibe sasany ao anatin'izany ny ankamaroan'ny zava-mitranga. Ary avy eo tsy azo atao fotsiny ny miditra amin'ny lalao.
Yeah. Ary mazava ho azy, any Florida dia tsy misy orinasa manana fananana mihoatra ny 5% amin'ny lisansa iray. Ka tsy toy ny azonao atao… Ny orinasa iray any Florida dia afaka mividy fahazoan-dàlana hafa. Fa eny, tiako holazaina fa tsy misy satroka tena izy.
Tsia, tokony hisaraka ireo fahazoan-dàlana. Ka tsy misy antony tokony hiarahan'izy ireo lisitra iray. Midika izany fa manana sanda 50 tapitrisa dolara ny lisansa. Ka maninona no ampiarahinao ho lasa lisansa iray izy ireo raha manana io sanda io? Noho izany, tiako holazaina fa mahita ny sasany toa an'i MedMen ianao, nanao fandroahana lehibe teto fotsiny ry zareo. Fantatro fa nanana drafitra lehibe ho an'ireo dispenseraire izy ireo ary nanala olona marobe. Ary tena maro amin'izy ireo, MedMen sy Surterra no mamatsy vola ny fanangonan-tsonia eto mba hiala voly, ary nametraka renivohitra lehibe izy ireo, ary mazava ho azy fa miloka amin'ny fialam-boly ho vita-
Inona no mitranga amin'ny fanatontosana ara-dalàna ny fialamboly Florida ho an'ny 2020?
Tanteraka. Ka nisy vondrona roa mifehy an'i Florida ary avy eo misy ny fanangonan-tsonia MILF. Ka mifehy ny Florida dia nanomboka nanomboka aloha be. Ny olan'izy ireo dia ny tsy nahazo ny fanohanan'ireo 22 nahazo alalana, ka tena tsy nanana famatsiam-bola hananana sonia izy ireo. Mila sonia 700,000 XNUMX mahery ianao haka izany amin'ny latsa-bato eto Florida. Ary nahatratra olona maherin'ny zato mahery izy ireo, tonga tamin'ny famerenan'ny Fitsarana Tampony, izay nahafinaritra fa azon'izy ireo natao izany. Fa avy eo dia niditra an-tsambo ny MILF ary i MedMen sy Surterra no namatsy vola azy ireo ary maro ny olona no sosotra tamin'ny fiteny sasany tao amin'io fanangonan-tsonia io. Tezitra aho satria tiako fotsiny ny hiarahan'ny rehetra miasa. Tena mahasosotra tokoa ny ady ataontsika raha toa ka niaraka daholo isika rehetra.
Izao dia manana Regulate Florida ianao izay manana sonia 100,000 XNUMX. Nahazo MILFS ianao izay nahazo sonia an-jato alina. Nandeha ny fotoana, tamin'ny ankapobeny dia tsy maintsy nanana vola maromaro izy ireo tamin'ny volana febroary, tsy ho nokapohin'izy ireo izany. Dia niankohoka izy ireo tamin'ny ankapobeny. Mampalahelo izany, nanana fotoana nihaonan'izy ireo izy ireo ary heveriko fa raha niaraka izy ireo dia ho hitantsika ho ara-dalàna izany. Ny olana lehibe indrindra dia ny fitomboan'ny trano. Fantatro fa vao notantarainao teo am-piandohan'ny fampisehoana fa manandrana miady amin'ny tanindrazana ianao. Ny fanangonan-tsonia MILF dia tsy nisy na inona na inona tao momba ny fitomboan'ny trano, mba hifehezana an'i Florida.
Izao hoy ianao ity fanangonan-tsonia MILF ity, efa namaha ny fanangonan-tsonia MILF ve ianao? Satria maheno ny MILF aho ary toy ny hoe, "Heveriko fa tokony ho nahazo sonia bebe kokoa izany, indrindra fa tany Florida." Midika inona izany?
Florida momba ny fanamafisana ara-dalàna ny marijuana
Fantatrao ve, antsoiko hoe ilay fanangonan-tsonia MILF. Fanontaniana tsara izany.
Ara-dalàna ny marijuana any Florida. [crosstalk 00:15:50] Saingy ny filazanao ny MILF, izay tokony ho izy ireo no natahoran'izy ireo, tokony ho namidy izany izy ireo taorian'izay, satria [crosstalk 00:15:59] -
Ary azonao izany, niresaka an'izany ianao. Ie, saingy izany dia karazana olana iray izay itiavanao ny hoe, “Eny ary, manana an'ity fandraisana andraikitra roa mifaninana [tsy heno 00:16:08] ity ianao ary avy eo vao nanao, nanao ny asanao ho mafy indroa. Ary avy eo indray, homena fitomboana any an-trano ve ny marary sy ny iray amin'izy ireo? Sa inona ny olana momba ny fitomboan'ny trano izay nesorin'ny iray tamin'ny iray hafa?
Ka ny tena Regulate Florida dia ny hetsika ifotony an'ny olona andavanandro izay tena maniry ara-dalàna ny marijuana fotsiny. Ny hetsika MILF dia tena notohanan'ny MedMen sy Surterra ary tombony ho azy ireo ny tsy nampidirina na inona na inona mifandraika amin'ny fitomboan'ny trano. Mazava ho azy fa hiady hevitra izy ireo fa nangina izy ireo raha ny amin'ny fitomboan'ny trano ary avelan'izy ireo any amin'ny mpanao lalàna ary nanana ny antony handaozany ny trano izy ireo noho izany. Nilaza izy ireo fa hanasarotra ny fanitsiana ny lalàm-panorenana ary mba hahazoana fanitsiana lalàmpanorenana dia tadiavinao ho tsotra izany ary tian'izy ireo hitazona izany, toy ny fanangonan-tsonia MILF tena tsotra, fohy dia fohy. Ny fanangonan-tsonia any Florida dia lava be ary misy antsipiriany be dia be ao aminy, ka-
Ny fanontaniako momba an'i Florida ary koa ny an'ny State Washington toy izany ary [tsy henoina 00:17:11] tsia. Heveriko fa fanontaniana roa. Voalohany, azon'ny mpanao lalàna any Florida atao ve ny miara-mientana ary mametraka lalàna? Satria rehefa miresaka momba ny fandraisana andraikitra amin'ny fifidianana ianao dia mety ho fizarana faharoa io. Napetrakao izay heverina fa manitsy ny lalàm-panorenana ary matetika dia fohy izy io. Iza no mandika izany, ary mametaka lalàna mba hahafahany ho rubric mpanao lalàna toa antsika na mila amin'ny rongony amin'ny maha-indostria antsika?
Yeah. Ka amin'izao fotoana izao dia manana ny senatera Jeff Brandes namoaka ny volavolan-dalàna senatera 1860 izay ampiasaina amin'ny olon-dehibe isika, raha ny marina tamin'ny solontenan'ny trano fivoriana mpanao lalàna Michael Grieco dia namoaka volavolan-dalàna momba ny fialamboly ihany koa izy. Fantany fa tsy izany, naman'i Michael aho, hoy izy tamiko fa tsy tena voatifitra izany. Saingy te handefa ilay hafatra izy hoe: “Hey, zavatra iray izay farafaharatsiny tianay hananana ao anatin'ny dinika ity tamin'ny taon-dasa.” Ka tamin'ity taona ity i Jeff Brandes dia nametraka ity volavolan-dalàna 1860 ity. Volavolan-dalàna tsara izany. Manohana azy aho. Manana izany, fantatro fa niresaka betsaka momba ny singa ara-tsosialy ara-tsosialy amin'ny lalàn'i Illinois izahay. Manana singa izy io, mamela ny famoahana ny heloka bevava. Ka amin'ny lafiny sasany dia misy singa fitoviana ara-tsosialy ao-
Saingy tsy manome isa ho an'ireo mpangataka mba hisamborana rongony na zavatra hafa.
Marina indrindra, eny. Ny tiako holazaina dia ny any Illinois, araka ny fantatrao, ianao dia mahazo 20% amin'ireo isa raha toa ianao ka mihatra amin'ny olona manana tompona sy mifehy an'io orinasa io. Ary izany dia isa be dia be. Ka na iza na iza izay tsy mampihatra amin'ny fizaram-bola ara-tsosialy dia somary betsaka, tsy manam-potoana izy ireo. Ka tsy nanome na inona na inona izy ireo. Mazava ho azy-
Tsy maintsy hilalao ianao, rafitra fahazoan-dàlana mifaninana io.
Ie, ary ny tena izy dia ny miaraka amin'ilay mpanao lalàna mpandala ny nentin-drazana mpandala ny nentin-drazana amin'izao fotoana izao, kely dia kely ny mety hitrangan'ilay mpanao lalàna. Tena azo inoana izany amin'ny alàlan'ny fanitsiana ny lalàm-panorenana. Saingy fantatrao hoe, amin'ity indostria ity, tsy fantatrao mihitsy. Fantatrao ve fa manantena aho. Mazava ho azy fa mitazona ny hetsika amin'ity volavolan-dalàna ity aho. Ao am-pivoriana izy ireo izao ary mivory ary miresaka momba izany izy ireo.
Mety tsy hiafara amin'ny endrika endriny ankehitriny izy io. Mety handalo fanitsiana maro isankarazany amin'ny fanatanterahana azy io ary hahazoana fankatoavana. Fa fanararaotana lehibe izany. Ary ny tena mahaliana momba azy dia izy koa, zavatra lehibe any Florida ny fampidirana mitsangana. Tsy mahazo manao fifanarahana na inona na inona izy ireo. Noho izany, manomboka amin'ny fitomboana, hatramin'ny fanodinana, famoahana dia tsy afaka mifidy na iza na iza amin'ireo serivisy ireo izy ireo.
Ny volavolan-dalàna momba ny antenimieran-doholona 1860 dia mamela azy ireo hifanaraka amin'ny sasany amin'ireny. Ka ny dikan'izany dia ny fisian'ny mpanome tolotra izay afaka miditra sy manao fifanarahana amin'ireo orinasa manana fahazoan-dàlana ireo. Noho izany dia maro ny olona no mila mahatakatra fa raha mbola te hanao fitaterana izy ireo dia hisy ny fotoana hipoiran'ireo orinasa manampahaizana manokana amin'ny fitaterana rongony ary tsy misy eto Florida amin'izao fotoana izao.
Voalazanao fa mpanao politika mpandala ny nentin-drazana ianao, ary rehefa mieritreritra an'i Florida aho dia mieritreritra ny antitra sy ny conservatisme ary ny vola rehetra any. Nipetraka tany Jersey aho taloha, ka fantatro tsara ny toe-tsain'ny mponina sy ny sisa. Mieritreritra ve ianao amin'ny maha mponina azy fa tsy olona mijery ny politikanao, misy fihemorana be avy amin'i Big Pharma? Ny tiako holazaina dia ahoana no mahatonga ny olona maro kokoa tsy hanatratra ny isan'ireo olona efa nifidy anao, satria io olona mpandala ny nentin-drazana io, ny tiako holazaina dia manao marijuana ho fady isika. Tsia, toy ny menaka manitra izy io. Aleo noho ny toaka. Toy ny amin'ny farany rehefa tonga amin'ny fanarahana lalàna izay tadiavintsika rehetra isika, dia afaka mividy azy toy ny broccoli ianao, sa tsy izany? Toy ny kilao amin'ny 50 cents, satria mihabe ny olona.
Andao hataontsika sary farafaharatsiny ao amin'ny vodka farafaharatsiny, toy ny karatra [tsy reko 00:21:09]. Ho lasa indostria lafo ihany koa io. Fa afaka miditra ao ianao.
Jereo tsara, raha mijery amin'ny ambaratonga federaly ianao, dia ho hitanao fa manomboka miara-mivory ny roa tonta amin'ity olana ity. Ary heveriko fa manomboka mahita izany ianao any Florida, ary hitanao izany manerana ny fanjakana maro samihafa. Ka mieritreritra ara-tantara aho, mazava ho azy fa ireo mpandala ny nentin-drazana no nisy… Ary jereo, tsy manana na inona na inona mifanohitra amin'ireo mpandala ny nentin-drazana aho. Raha ny tena izy dia mpandala ny nentin-drazana aho, mifidy ireo olana. Fa amin'ity olana manokana ity dia tena reraka izy ireo, saingy maro amin'izy ireo no nivadika. Izaho dia niresaka tamin'ireo mpanao lalàna mpandala ny nentin-drazana mpandala ny nentin-drazana izay nivadika, ary mpino izy ireo. Niresaka tamin'ny sasany amin'ireo demografika taloha kokoa ananantsika eto Florida izy ireo. Fantatr'izy ireo ny tombony azo avy amin'ny fanafody. Ny sasany amin'ireo dokotera miara-miasa amiko dia tena naheno ny feony tany Tallahassee ao amin'ny Capitol-panjakana, ka-
Heverinao ve ny hafatr'i… Miala tsiny aho, iza amin'ireo no heverinao fa mihaona kokoa amin'ny vahoaka Florida momba ny lalàna marijuana? Ny hafatra momba ny mahasoa azy, ny fitsaboana mahomby, na ny hafatra hoe orinasa tsara izy io. Satria rehefa mieritreritra an'i Florida aho dia mihevitra fa mpandala ny nentin-drazana, saingy mieritreritra aho hoe: “Ie, saingy mpandala ny nentin-drazana izy ireo. Miahy izay ataony izy ireo. Miahy ny isan'izy ireo izy ireo. ”
Ka izany no antony na inona na inona hafatra ezahanao ampitaina, jereo, any amin'ny sekoly fanabeazana dia nampianarina anao foana ianao hahafantatra hoe iza ny mpihaino anao. Ary zavatra iray tena ilaiko izany… fantatro foana hoe iza ny mpihaino ahy. Fantatrao raha miresaka amin'ny simpleton versa olona nahita fianarana ianao, olona mahatakatra fitantanam-bola, olona tsy mahatakatra fitantanam-bola. Tokony ho azonao ny olona iresahanao. Ary eny, ny zavatra izay mifanentana amin'ny olona mpandala ny nentin-drazana dia hoe zavatra ahazoam-bola io. Betsaka ny fotoana mety eto. Dolara hetra marobe azontsika atao, mazava ho azy fa tsy te hanao ny lesoka nataon'i California sy ny sasany amin'ireo fanjakana hafa amin'ny fandoavan-ketra mafy loatra isika.
Saingy misy fotoana betsaka amin'ny raharaham-barotra heveriko fa mifanaraka amin'ny vondrona mpandala ny nentin-drazana. Fa ilaina ihany koa ny miresaka momba ny kilema sasany. Ary ny fanamby iray hafa eto dia ireo tanàna maro izay mandrara ny dispensaire izay avela amin'ny lalànam-panjakana. Ka dia nanao asa betsaka tamin'ny ambaratonga teo an-toerana ihany koa aho, nampianatra ny tompon'andraikitra sasany ao an-toerana ny antony tsy tokony handraran'izy ireo. Ary mazava ho azy fa maro amin'ireo no mifototra amin'ny stigma. Fampianarana ny besinimaro fotsiny izany ary andramana-
Marijuana sy ny vokany NIMBY, tsy ny vokatr'izany ao ambadiko.
Fa andao hanabe ny besoim-bahoaka dieny izao ary izaho ho vahoaka, satria izaho dia avy any Illinois izay tsy avela hanao hetsika amin'ny fifidianana mba hanitsiana ny lalàm-panorenantsika. Ahoana no fandraisanao ilay fanitsiana kely kely napetrak'izy ireo tao ka namorona lamba fiaran-dalamby iray manontolo misy ny lalàna mifehy mba hahafahanao manome alalana sy mifehy ny indostrian'ny rongony? Sa ny indostrian'ny marijuana any Florida?
Manomboka amin'ny fanangonan-tsonia izany rehetra izany, noho izany dia mila mandrafitra ilay fanangonan-tsonia ianao, ary toa ny nolazaiko hoe, lava be ny fanangonan-tsonia Regulate Florida. Ary raha ny tena izy rehefa avy mamaky an'izany ianao dia mieritreritra aho fa mila sonia 90,000 766,000 mahery. Avy eo ny Fitsarana Tampony dia nanao famerenana ara-bola ary nandinika ny fiteny izy ireo, ary ny fiteny fanitsiana ny lalàm-panorenana dia mila miharihary fa tena mazava ary tena mila lohahevitra iray monja. Tsy tokony handinika lohahevitra maro ianao. Fantatrao ve fa rehefa tafasaraka amin'ny famerenana ny Fitsarana Tampony ianao dia mahazo amin'ny sonia ny sonia, mila mahazo sonia XNUMX na zavatra toa izany ianao.
Avy eo mahazo ny bileta, mila mifidy ianao. Avy eo dia niditra ny mpanao lalàna ary tsy maintsy [tsy ren'izy ireo 00:24:45] ny lalàna izay mifanaraka amin'ny lalàm-panorenana. Ary izany no tena izy momba ny raharaham-pitsarana navoakan'ny Fitsarana Tampony tao Florida. Ary rehefa misy ny fifanolanana misy eo amin'ny statuta Florida sy ny lalàm-panorenana Florida, dia misy olana ary izany lalàna izany dia heverina ho tsy mifanaraka amin'ny lalàm-panorenana. Ary izany no toe-javatra iainanay ankehitriny.
Marina izany, ary efa ela aho no tsy tao amin'ny morontsiraka Atsinanana. Mbola zavatra hafa ve ny fialantsasatry ny lohataona? Toa an'i Daytona ve izany rehetra izany ary mbola zavatra iray ihany?
Tanteraka. Mipetraka ao amoron-dranomasina Fort Lauderdale aho, eny, tonga ny volana martsa, very saina eto io. Miezaka ny manalavitra ny morontsiraka aho amin'io fotoana io.
Ka jereo, ny todika izay tokony hatao eto amin'izao fotoana izao, sa tsy izany? Satria mahatadidy aho ary midika izany fa misy bibilava mandeha.
Bibikely. Ary i Sunterra na Surterra no tompon'antoka an'i Jimmy Buffett, dia ilay iray amin'ireo orinasa… Ka Buffett dia manana hetsika eo amin'ny tsenan'ny rongony Florida.
Eny, tafiditra ao i Surterra, ary holazaiko aminao, miaraka amoron-dranomasina, iray amin'ireo Deerfield, niresaka tamin'ny fihainoana an'i Deerfield aho rehefa nitady handrarana ireo dispenser marijuana izy ireo ary ny tena nahasarika ny sain'izy ireo dia rehefa nividy ilay toerana teny amoron-dranomasina ny MedMen. . Ary MedMen, fialamboly izy ireo, ny fifantohany, rehefa mijery azy ireo amin'ny marketing-
Eny, izy ireo no lalao rongony rongony tena tsara sy fialamboly, ary noho izany dia nieritreritra izy ireo hoe: “Oh, dimy taona manomboka izao dia samy hanana maridrefy isika, hihaino reggae isika, ho tsara tarehy.
Eo amoron-dranomasina, mangatsiaka ao amin'ny Deerfield Beach. Ary izany dia nampatahotra ny zava-bitan'ny Deerfield. Ary niafara tamin'ny fanaovana fandrarana izy ireo taorian'ny zava-misy. Ka nahazo ny toerana misy azy avy eo ny MedMen, saingy noraran'izy ireo izany. Ary tena mino aho fa io fanapahan-kevitra io dia tena mifanohitra amin'izay navela hataon'izy ireo eo ambanin'ny statuta Florida. Tsy mamela azy ireo hametraka ny statuta Florida… Raha mamela dispensary marijuana izy ireo dia tsy afaka mametraka satroka. Ary ny zavatra inoako dia nitranga raha namaky ny minitra an'io fihainoana io ianao nandritra ny fotoam-pivoriana Deerfield, ary izany dia niseho manerana ny tanàna isan-karazany, ny tena fototry ny faniriany handrara ireo dispensaire dia ny niheveran'izy ireo fa efa ampy ny azy ireo.
Ka raha tsy avelan'ny lalàna hametraka anao eo amin'ny tendrony farany amin'ny volan'ny dispensaries ianao, maninona ianao no avela mamela dispensaries sasantsasany ary avy eo miteny hoe: “Eny, manana ampy isika, izao dia noraranay izany . " Raha ny tena izy dia zava-dratsy mihoatra ny endrika. Mazava ho azy fa manao zavatra mitovy izy ireo. Ka raha misy MMTC te-hiady amin'io fandrarana io dia heveriko fa hanana tranga tena tsara izy ireo.
Toa tsy dia mahalasa saina ahy any Florida ny toerana rehetra fa misoroka rongony eny amoron-dranomasina ireto mpanao politika masira ireto. Ny tranga ratsy rehetra tadidiko dia ny fitomboako izay nitranga tany Florida na Atlanta na ny ratsy rehetra, farafaharatsiny fety tamin'ny fotoanan'ny fitsingerenan'ny lohataona dia nirongatra alikaola. Tsy maintsy nanana zava-dratsy ratsy kokoa ve ianao tao amin'ny tanànanao feno zava-pisotro misy alikaola alohan'ny hitenenanao hoe: "Eny, andao hanome fotoana ny ahi-dratsy."
Rehefa nanao Big Cypress i Phish tamin'ny taona vaovao, ary tsy te hiteny aho hoe: “Andriamanitra ô, misy kaonseritra Phish maharitra fito ora eny amoron-dranomasina, lalana mankany amin'ny lohan'afo any Florida.” Tsia, ny tiako holazaina, fa ny stigma dia tena lehilahy. Ary miparitaka io stigma io. Ary avy eo raha any no alehan'ny olona misotro ronono, dia mifandraika amin'ny taona ihany koa izany. Ka tiako holazaina fa mety ho-
Fa ny tiako holazaina dia hitanao fa tonga izany.
Ary avy eo tamin'ny fitsidihany Silver Tuna, dia any ivelany any izy manandrana mankeny amin'ireo vohitra ary manaparitaka izany stigma izany, saingy-
Nefa hitanao ny tena-
Ary na izany stigma izany aza dia mitondra. Manomboka tsy dia diso lohahevitra aho, saingy manomboka miditra amin'ny hetsika holatra holatra ary dia natomboko ny herinandro lasa teo. Handeha amin'ny tranokalanay izahay amin'ny volana febroary, fa ny tsy mitady tombom-barotra dia mifantoka amin'ny fampiasana fikarohana ara-pitsaboana sy ara-panahy hitondrana fanavaozana ara-dalàna ny holatra psilocybin any Florida. Ary efa nanao efitrano manan-danja amin'izany isika. Fa ny fanamby indray dia ny stigma.
Toy izany koa amin'ny rongony, tsy maintsy resinao ny stigma ary ianao no nilaza an'io, alikaola, manana olona misotro be loatra ianao ary matin'ny toaka-
[tsy azo heverina 00:28:52] arivo tamin'ity taona ity.
… Tsy misy maty amin'ny sigara rongony ary tsy misy maty amin'ny fihinanana holatra psilocybin. Mety handray fanapahan-kevitra ratsy izy ireo izao ary mieritreritra aho fa izany no antony nilazako fa mila manana fanavaozana tompon'andraikitra isika. Betsaka ny olona no mandray azy io ao anaty toerana iray angamba. Ka nandeha an-tongotra teo alohan'ny fiara ny olona ary maro-
Holatra Psilocybin & fanamafisana ara-dalàna ny Marijuana
Marina, fa satria gin hallucinate, fa toa manana fananana ara-pahasalamana. Na izany aza, ary tsy dia faly amin'izany aho, ary alohan'ny hiverenanay ny fiheverantsika ny lalàna marijuana Florida, tena vetivety, inona ny psilocybin voalahatra eo ambanin'ny lalàna mifehy ny fifehezana?
Psilocybin dia nanana tantara lava teo amin'ny kolontsainay. Ary ny mahaliana dia ny miverina, mijery ireo foko ianao, ny foko lehibe rehetra dia mbola manao izany izy ireo ary ny sasany amin'izy ireo dia avela haka zavatra toa an'i Ayahuasca Burner noho ny antony ara-panahy sy ny zavatra toy izany. Fa vita ny fikarohana. Ary tena ny fomba nidirako tao, izay heveriko fa tena mahaliana dia saika, tsy ny mpanjifako rehetra, fa be ny mpanjifako rongony dia liana fatratra ny hahazo psilocybin ary liana izy ireo ny hametraka renivohitra, hanangona renivohitra ary hanomboka manao zavatra, na any Jamaika. Denver dia namoaka lalàna fotsiny. Oakland decriminalised, raha ny marina Chicago decriminalised koa. Vermont dia manana faktiora. Nahazo fanangonan-tsonia momba ny lalàm-panorenana i Oregon.
Ary noho izany dia nahazo ireo fanontaniana ireo aho. Ary avy eo dia tena marina fa tsy liana tamin'io aho, satria noheveriko ho sangisangy izany. Izaho manokana tsy naka psychedelics. Noho izany dia niresaka tamin'ny dokotera sasantsasany izay solontenako aho ary niresaka momba ny dokotera fito ka hatramin'ny 10, ary ny tanana, ny tsirairay amin'izy ireo dia mpino be ny lanjan'ny fanafody. Ka nanomboka nanao ny fikarohana nataoko aho ary nanomboka niresaka tamin'ireo mpamboly sy mpitsabo tao Jamaika. Miresaka amin'ireo mpitsabo aretin-tsaina eto ambany eto izay mampiasa ketamine, ny sasany amin'ireo dokotera fitantanana fanaintainana ahy izay mampiasa ketamine. Ary mino aho fa bebe kokoa noho ny fanafody fanafody holatra psilocybin ankehitriny noho ny rongony. Ny porofo ananan'izy ireo dia goavambe. Ary na ny FDA aza manomboka manomboka ao aoriany. Ka raha ny marina dia avy amin'ny fomba fijery FDA ekena kokoa noho ny rongony.
Saingy miresaka toy ny doka micro ianao, na dia toy ny amin'ny shroom aza. Fantatro ny tovolahy iray eto, hapetrany ao anaty kapsily izy ireo ary ny tiako holazaina dia tadidiko tamin'ny mbola kely, tamin'ny naha-mpianatry ny oniversite ahy, afaka naka mpivady ianao, nataoko tamin'ny fahafinaretana izany. Toy izao dia ho alina tsara, satria nahazo be aho. Ary mahasoa ara-pahasalamana izany. Midika izany fa zavatra voajanahary no resahinao. Afaka manampy antsika ny zava-drehetra, sa tsy izany? Na dia ny fivontosana sy ireo zavatra hafa rehetra ireo dia izany rehetra izany-
Eny, zavatra iray heveriko fa tena zava-dehibe. Isaky ny mifanakalo hevitra momba ny dian'ny olona amin'ny holatra psilocybin aho dia samy miteny an-tononkalo toa azy ireo daholo izy ireo, nizara sombin-kodiny izy ireo na samy manana an'ity firaisana iray ity [tsy henoina 00:31:49]. Raha mieritreritra momba ny zavatra telo lehibe tadiavin'izy ireo hositranina amin'ny holatra psilocybin ianao dia ny fahaketrahana, ny PTSD ary ny fiankinan-doha. Ary raha tena mieritreritra momba ireo zavatra telo inona ireo ianao dia misy zavatra mitranga ao an-tsainao, misy ny fanakanana. Misy zavatra tsy eo fotsiny. Ary inona no ataon'ny holatra psilocybin, mamela anao handatsaka izany ve ianao ary hanokatra ny sainao ary hahazo fomba fijery misimisy kokoa ary hamerina ny sainao. Ary izany no ataon'izy ireo any Jamaika. Misy ivon-toeram-pitsaboana maro any izay alehanao ary manao fialan-tsasatra fito andro ianao sns. [Crosstalk 00:32:23] -
Fantatro ny zavatra ataoko taorian'ny nifaranan'ny vanim-potoana fangatahana teto tamin'ny volana martsa-
Saingy fantatrao, azo ekena ny mandray pilina iray izay mahatonga anao hihomehy toa an'i Xanax ary tsy mifanohitra amin'ny pilina, toy io holatra holatra io.
Na ny iray antsoina hoe SSRI, fandoavana onitra an'io, saingy heveriko fa ny fanomezana ara-dalàna ny rongony any Florida, Illinois, Seattle. Ary avy eo dia toa ny deregulation na ny fanovana ny fibaikoana ny psilocybin dia mifandraika amin'ny fahatsapana fa ny fomba nampiasainay tamin'ny taonjato faha-20 hifehezana ireo zava-mahadomelina ireo dia hadalana sy diso fotsiny. Ary nandratra anay amin'ny maha-fiarahamonina anay izany satria namorona fiainana mora tebiteby kokoa, fiainana mirona amin'ny fiankinan-doha kokoa. Ary hampiroborobo izany izy ireo. Ny tiako holazaina dia tadidinao tamin'ny taona 50 tany ho any izy ireo rehefa nanana sigara Flintstone nifoka sigara tamin'ny fahitalavitra, namidy azy ireo ara-bakiteny tamin'ny ankizy. Ary ankehitriny dia tsy maintsy miady amin'ny stigma ianao izay noforonin'io taonjato io mba handrosoana ary hitovy amin'ny hoe, “Tsia, jereo ity fikarohana ara-pitsaboana ity. Fa maninona isika no tsy manao an'io? ”
Ary ny tena mahavariana dia efa niresaka tamin'ny mpisolovava manerana ny firenena izay mitarika ity hetsika ity aho. Ry zalahy toa an'i Noah Potter izay tao amin'ny Blog Psychedelic Law nanomboka tamin'ny taona 90, tiako holazaina fa mitondra fampahalalana marobe momba ny psychedelics sy ny rafitra ara-dalàna ary ny toy izany ity lehilahy ity. Fa ny tena mahavariana dia ny mitady izay tompon'andraikitra, ary tena mampiasa ilay teny hoe tompon'andraikitra aho, rafitra ara-dalàna tompon'andraikitra. Tsy hitovy amin'ny rongony izany, ary misy sekolin'ny eritreritra miaraka amin'ny mpikatroka mafàna fo izay tsy mino izy ireo fa tokony ho sehatry ny fitsaboana izany. Satria rehefa miatrika ny sehatry ny fitsaboana ianao, ary efa niresaka tamin'i Noah Potter momba an'io tamin'ny halavany aho ary manana bilaogy mahafinaritra momba an'io lohahevitra io izy.
Fa rehefa miresaka momba ny fitsaboana ianao, dia mety manana fepetra mahafeno fepetra ianao, ka avelanao hanao izany ara-pahasalamana. Na raha tsy manana fepetra mahafeno fepetra ianao dia mpanao heloka bevava ary tsy mahazo manao an'izany ianao raha mpanao heloka bevava. Ary ny zavatra tsapan'i Noa sy ireo mpisolovava hafa efa noresahiko dia ny zava-dehibe lavitra noho ny fitsaboana holatra psilocybin, ohatra ara-panahy, ohatra. Ary izany no mahatonga ny tsy mitady tombom-barotra hampiasa fikarohana ara-pitsaboana sy ara-panahy hitondrana fanavaozana ara-dalàna tompon'andraikitra.
Nahasosotra ahy foana ny momba ny hetsika rongony dia ny nametrahan'izy ireo ny kibosh ho an'ny Zo Fanitsiana Voalohany. Raha misy miteny hoe: “Tsia, mino ny rongony aho noho ny antony ara-panahy ary zoko ny mampihatra ny fivavahako amin'ny fomba tiako ampiharina.” Mbola hiteny ry zareo hoe: “Nah.”
Ary na amin'ny rongony na amin'ny holatra, dia olana amin'ny fahasalamana izany. Satria ny tiako holazaina dia manararaotra azy io ny olona fa amin'ny lafiny iray ihany dia afaka maka betsaka amin'izany ny olona ary tsara kokoa ho azy ny fiainany. Izahay dia nanao heloka bevava, i Amerika dia mijaly noho ny zavatra tiako ho eritreretina hoe toy ny Syndrome zanakavavin'ny Mpitoriteny, sa tsy izany? Voahitsakitsakao izy ary notehirizinao tao anaty lalimoara kely nandritra ny androm-piainanao ary izao, "Oay, voafitaka daholo izahay satria adinoko ny mampianatra anao hanao zavatra tsara." Ny kafe dia zava-mahadomelina, ny kafeinina amin'ny fiainantsika andavanandro-
Moa tsy izany ve no fanaony matetika, ary averiko indray, ny antony tsy nidirako holatra mihitsy, satria nanao indray mandeha aho ary nomen'izy ireo ahy niaraka tamin'izay ny shit sy ny pukes. Fomba mahatsikaiky hanombohana. Fa fantatrao,… mitranga. Ary noho izany, ary avy eo koa, mbola nahatafiditra baolina ho ahy ihany io, tsy dia io ambaratonga io, fa fampiasam-bola ihany koa. Raha ny fandinihako azy, tsy toa an-dry shaman ve izy ireo izay heverina fa hitarika azy manokana…
Ary holazaiko aminao fa misy lehilahy eto Miami manao izany. Niresaka tamin'izy ireo aho fa tena shaman izy ireo eto izay mitarika ny olona hamakivaky ireo dia ara-panahy ireo. Misy vondrona eto ihany koa izay manangana fisintomana any Jamaika izay ara-dalàna tanteraka. Ka, izany tokoa, ny resahan'izy ireo betsaka dia ny setanao sy ny fametrahana anao. Tokony ho azonao antoka ny filazan'izy ireo rehefa napetraka izy ireo, manana fikasana mety ianao hiditra ao, ary mila manana ny toerana mety.
Satria voasintona amin'ny lafiny iray ny fihetseham-ponao. Ka raha any amin'ny toerana mahatsiravina ianao manodidina ny olona tsy atokisanao ary tsy tianao dia hanana dia mahatsiravina ianao. Ary ny mifamadika amin'izany. Raha ao amin'ny toerana tsara tarehy ianao izay misy anao amin'ireo olona tianao sy hikarakara anao ary izay mitady anao. Ary izany no asan'ny shaman, dia ny mitarika anao amin'ny dia.
Ary halako izany. Mampihomehy izay tsapako, roa taona lasa izay dia tsy ho niresaka toy izao mihitsy aho. Azo antoka fa tsy hippie aho na toy izany. Fa fantatrao-
Ny fahatsapana ny stigma an'i Marijuana
Tsia, fa zava-misy fotsiny ireo. Tsy azo ihodivirana ny hippies mandritra ny fotoana rehetra.
Saingy tsy marina izany, satria amin'izao fotoana izao dia miaina ny stigma izay iadinantsika amin'ny tena izy ianao. Satria tsy ho nieritreritra an'ity aho roa taona lasa izay ary ny olona dia milaza an'izany, "Jereo, napetraka tamiko ny stigma ary efa nandalo izany aho. Ary tsapako fa hadalàna fotsiny io. ” Saingy [crosstalk 00:37:05] amin'ny sanganasa izay mahomby amin'ny olombelona ny stigma.
Miaraka amin'ny zava-mahadomelina, hiantso ny ara-panahy ve ianao, na amin'ny rongony na amin'ny holatra. Psikolojia koa io, sa tsy izany? Ara-panahy, psikolojia. Ny fahasalaman'ny saintsika. Miresaka momba ny fahasalamana ara-tsaina isika, ary izany koa no ara-panahy. Toy ny rehefa manana fahasalamana ara-tsaina sy fomba fijery mety ianao, toy ny hoe: "Fantatrao fa, na raisinao ho an'ny PTSD na fanaintainana ara-batana na ara-batana io, dia mbola afaka miasa amin'ny maha-olombelona anao ianao. Ary miaina tsy misy fahatsiarovan-tena ny olona. Miaina tsy misy fahatsapana fahatsarana izy ireo. Satria matahotra ny handray azy izy ireo satria tsy ara-dalàna.
Ary izany no mahatonga ahy mieritreritra fa resaka tompon'andraikitra daholo izany. Mihevitra aho fa mila tompon'andraikitra amin'ny maha-fiarahamonina isika. Mila tompon'andraikitra amin'ny lalànantsika isika ary mila manana andraikitra amin'ny tenantsika. Ary fantatrao fa, raha mihinana zava-mahadomelina ianao na manana fitsipika tsy tompon'andraikitra ary manao lalàna tsy misy lalàna fotsiny, dia tsy ho an'izay koa aho.
Ka tena zava-dehibe tokoa ny fananantsika resaka. Manao ny fikarohana tokony hataonay izahay, ary manana fifanakalozan-kevitra mahomby izay azonay atao… Ho marin-toetra aho, tsy fantatro manokana izay tokony ho rafitra ara-dalàna. Ary izany no antony tsy ahazoako tombom-barotra, tsy handeha hitsivolana ny fanaovana heloka bevava intsony aho izao. Ny ezahiko atao dia ny fampahafantarana ny saiko, tsy ho an'ny fiaraha-monina irery, ho an'ny tenako. Satria tiako ny mamantatra ny rafitra ara-dalàna mety ary misy toerana hafa toa, jereo Kevin ao Denver, niresaka taminy aho. Nahavita asa tsara izy tamin'ny fitarihana an'i Denver voarohirohy, niresaka tamin'ireo lehilahy tany Oakland. Niresaka tamin'ny olona tena nanerana ny firenena aho ary nanao asa goavana izy ireo.
Fa amin'izao fotoana izao amiko manokana, tsy dia tsara amiko ny mametraka lalàna sasany raha tsy efa tena nampahafantatra ny fiainako manokana aho ary izany no ezahako hatao dia ny fampahafantarana ireo Floridianina eo amin'ny firenena, eo amin'izao tontolo izao sy ny tenako ary hahafahantsika tonga amin'ny vahaolana marina eto momba ny lalàna mifehy izany.
Eny, sarotra be izany. Mampiroborobo toy ny zavamaniry na zavatra iray isika ary avy eo dia toy ny miteny hoe: “Ry ankizy, mandehana mifoka sigara, fa tsy te ho tompon'andraikitra amin'ireo ankizy manadala hafa aho raha toa ka tsy nanao izany aho. lazao izy ireo hifoka ny tsimparifary. Fantatro fa tsy mampaninona izany, tena tsy manome fady aho. Mitovy amin'izy ireo… Fa-
Mpanohana tena manana farafahakeliny taona aho. Heveriko fa raha nihinana an'ireto zava-mahadomelina ireto aho tamin'ny mbola kely, dia mieritreritra aho fa ny atidohanao dia heveriko fa tsy ampy hivoarana. Fa amin'ny maha-olon-dehibe anao, raha toa ianao ka mihinana an'ireto zava-mahadomelina ireto amin'ny fikasana iray, na MDMA izany, dia misy porofo marobe MDMA manampy amin'ny PTSD, holatra psilocybin, ireo rehetra ireo dia sokajy ao anatin'ny psychedelics. Ary raha olon-dehibe ianao ary raisinao amin'ny fikasana marina sy amin'ny fahatakarana marina izy ireo dia mino tokoa aho fa mety ho fanafody. Fa raha iharan'ny fanararaotana ireo zava-mahadomelina ireo dia mety hanimba be koa izany. Ka ilaina ny resaka fotsiny.
Toy izany ny lalàna sy rongony any Florida na amin'ny fanjakana inona na inona, mangataka amin'ny olona ianao mba hanana fahalalana voalanjalanja, fahitana mivantana, fomba fijery marina momba ny olana sarotra iray izay tsapan'izy ireo fa tena misy. Mora lavitra kokoa ho an'ny olona ny miteny hoe: “Tsia, tsy manohana azy aho. Tsy mila zavatra aho. ” Satria tsy mila mamorona zavatra mety hahatonga azy ireo hahatsiaro tena ho tsy mila manontany na inona na inona izy ireo avy eo, na mila manova zavatra mbola tsy nisy teo aloha.
Noho izany dia azonao ireo lalàna rongony vaovao any Florida izay tokony hanananao ny $ 50 tapitrisa na any Illinois izay misy fangatahana 4,000 ho an'ny licence 75. Fantatrao àry fa hanenjika ny fanjakan'ny Illinois ny olona ary hiezaka ny hanana lisansa. Ary farafaharatsiny, ny fanaintainana izay mihamitombo izay misy antsika dia miasa amin'ny alàlan'ity fizotran-kevitra ity hahazoana antoka fa manana fanovana ara-dalàna isika. Fa ny tiako holazaina dia hoe fanamavoana fotsiny ka mora fotsiny. Ny zavatra tsotra indrindra dia ny miteny hoe: “Tsia, sambory daholo izy ireo.”
Ary izany tokoa, io dia karazana sahala amin'ny ataon'ny tanàna eto Florida. Manan-jo amin'ny lalàna mandrara ny dispensaries izy ireo. Ka maro amin'izy ireo no miteny hoe: "Tsy te-hanana izay rafitra ara-dalàna tokony hisy ao amin'ny ordonnansa izahay. Mora kokoa ho antsika ny manana liner iray izay miteny hoe: 'Voarara arakaraka ny statut Florida 381.986.' ”Boom, vita isika. Tsy mila miahiahy momba izany isika. Avelao ny tanàna hafa hamantatra izany. Izy ireo no ho laboratoara hanaovana fanandramana. Raha vantany vao manao izay ataony izy ireo dia handinika izany ary hamerina handinika. Izay tena izay no mitranga ankehitriny dia ireo tanàna hafa toa ny federalisma izay mamela ny fanjakana ho laboratoara fanandramana-
Ka tsara izany. Afaka miresaka momba ny lalàna momba ny fanjakana isika izao. Heveriko fa manitsakitsaka ny fanitsiana faha-14 io. Ahoana ny hevitrao momba ny lalàna momba ny fanjakana?
Tsara ny tiako holazaina, ny States Act dia manana fiteny tsara maro ao anatiny, manana fiteny ratsy maro ao aminy. Tiako fa ny adihevitra dia farafaharatsiny mba handrosoana amin'ny karazana governemanta federaly farafaharatsiny mba hanajana ny lalàm-panjakana amin'ny lafiny iray. Ary ny tena tsy takatry ny olona momba ny lalàna mifehy ny fanjakana, dia tena mamaritra ny federalisma fotsiny ary mamela ny fanjakana ho laboratoara fanandramana. Liana aho naheno hoe inona ny famakafakana ataonao raha ny antony-
Satria avy eo dia mila ny lalàna federaly ary karazana plug amin'ny lalàn'ny fanjakana izany. Ka ankehitriny ianao dia mitsabo ny federaly ambanin'ny fari-panjakan'ny fanjakana hafa ary toy ny hoe raha any Indiana aho, dia mpanao heloka bevava, fa raha Illinois noho izany fitondran-tena izany aho dia olona afaka. Ary noho izany dia mametraka ity fanjakan'ny andevo ity, karazana olana amin'ny fanjakana malalaka. Eny, tsy fanjakan'ny andevo izany fa fanjakana mpanao heloka bevava, fa raha afaka manameloka olona iray ianao dia azonao atao ny manamboatra azy ireo andevo araka ny fanitsiana faha-13. Ka mamorona lalàna federaly tsy manao fanamiana izay mitsabo ny olona amin'ny fomba hafa mifototra amin'ny fanjakana misy azy ireo amin'ny hetsika mitovy.
[tsy henoina 00:42:48] marina, satria tsy izaho no mpisolovava, teknisiana fotsiny aho eto. Ka toy ny hoe ny hetra amin'ny fanjakana no milaza hoe: “Eny, samy hanao izay saim-pantany isika tsirairay avy,” toy ny fanarahan-dalàna rongony, marina. Ary ny fahazarana sasany tsy manana an'io ary mbola tsy ara-dalàna amin'ny ankapobeny. Raha io olana io, firy no olana hafa toa izany any Amerika?
Afaka manaiky daholo isika fa ratsy ny mampihomehy zaza, saingy tsy afaka manaiky isika fa tokony ho zavamaniry mahasoa ity… Olana iray izany. Ny hetsi-panjakana heveriko fa zavatra lehibe, satria raha misy fanontaniana hafa lalina dia lalina amin'ny fiarahamonintsika dia hanafintohina izy ireo. Misy fanontaniana vitsivitsy tokony hapetraka, saingy efa voavaly ity fanontaniana ity. Mila mihalehibe isika, manara-dalàna ny zavatra amin'ny sehatra iray, mifanabe, toy ny fantatsika rehetra fa ratsy ny misotro be loatra, ary hitranga izany [crosstalk 00:43:38]. Fa handeha-
Heveriko fa ny zava-dehibe tokony ho takatra dia rehefa mieritreritra orinasa lehibe ianao, dia sarotra ho azy ireo ny mandray fanapahan-kevitra. Elaela izy ireo. Manana filankevi-pitantanana izy ireo, manana tompon'andraikitra tompon'andraikitra hamaly izy ireo, rehefa miresaka orinasa kely ianao dia afaka mandray fanapahan-kevitra haingana. Tena mitovy amin'ny fanjakana mifanohitra amin'ny governemanta federaly izany. Sambo goavambe ny governemanta federaly manandrana hihodina ary tsy afaka mihodina haingana izy ireo faingana toy ny fanjakana afaka mihodina.
Ary noho izany dia manandrana mandray ireto dingana kely amin'ny zazakely ireto izy ireo ary manodinkodina ny olana ary mahazo zavatra voatosika miadana sy miadana nefa azo antoka fa matoky aho fa hisy ny fandaozana io fandraràna federaly rongony io. Ny sambo fotsiny no lehibe ary tena sarotra be ny mihetsika.
Yeah. Fa firy ny fanontaniana ara-pitondran-tena hafa ao? Tsy misy azoko eritreretina akory.
Izay no antony anaovako lalàna rongony, satria tsy manam-paharoa izy ary samy hafa be. Izany no mahatonga ny bandy toa ahy sy Thomas heveriko fa… Zava-dehibe rehefa miteny amin'ny olona aho raha toa manandrana manangana orinasa rongony ianao ary tsy mifampiraharaha amin'ny mpisolovava izay tena mahalala izay ataon'izy ireo amin'ny rongony, hiditra amin'ny karazana fatorana isan-karazany ianao, satria tsy mitovy amin'ny indostria hafa izany. Azon'ny olona ampitahaina amin'ny zava-pisotro misy alikaola amin'ny sasany amin'ireo fanjakana fialamboly ireo fa tsy zava-pisotro misy alikaola. Lalina kokoa izany.
Fantatrao ve ny mpisolovava rongony polisy hafa izay niresaka tato ho ato tato ho ato?
Oh yeah. Ilay tovolahy misolo tena-
Parnof. Tsy afaka izao aho, io lehilahy io, raha ny tiako holazaina, ary Keith Stroup dia nandefa mailaka tamin'ny mpanolotsaina ara-dalàna rehetra momba azy fotsiny, saingy heveriko fa mpisolovava mpiaro ny heloka bevava kokoa izy amin'ny heviny fa tiany rongony sy ilay olon-dratsy. mazoto miasa ny mpanjifa, saingy tsy mino aho fa antsoin'izy ireo am-peo ao amin'ny sekoly fanabeazana. Heveriko fa antsoin'izy ireo am-pahazotoana izany, saingy eny, tsy tadidiko ny anarany, fa mpisolovava mpanao heloka bevava kosa izy-
Yeah, ry Brody?
Roddy. Heveriko fotsiny fa izy [tsy nandrenesam-peo 00:45:38] dia nitolona ho an'ny fitondran-tena rongony tany amin'ny fitsarana, nefa tamin'io fotoana io ihany dia nisafidy izy hanampy hiaro ity tovolahy natsipy tany ity, toy ny vaovaom-pirenena . Eny, vola izany, fa-
Zahao ary avy eo toa izany zavatra izany. Raha mandoa izany vola azony izany izy, dia nahazo soa avy tany Ukraine ary nandoa an'i Sly na izay anarany, ary avy eo dia nentiny tany amin'ny banky ary napetrany. Tsy navoakan'izy ireo izy satria MR 2. Ankehitriny, raha manandrana manao an'izany ho an'ny orinasako mpisolovava aho, satria mandoa 50 lehibe ny mpanjifako, dia andoavako 100,000 2 $ aho hanenjika ny fanjakan'i Illinois mba hahafahako mandamina lisansa. Mety hanidy ahy ny bankiko, satria hitovy izy ireo, “Tsia, tsy hitanao izay, raha miaro olona iray ianao noho ny heloka, tsy maninona. Fa raha miaro olona handika heloka ianao, MRB ambaratonga faharoa. ”
Yeah yeah. Ny tiako holazaina dia heveriko fa fanavahana izany raha ny fahitako antsika mpisolovava ao amin'ny habakabaka rongony satria tsy ara-teknika raha toa ka… Raha miaro olon-dratsy ianao dia mahazo miaro olon-dratsy. Fa raha toa ka tsy ara-dalàna ny rongony, raha toa ka manandrana manatanteraka fifanakalozana rongony ianao ary manao fifanarahana M&A dia manao fifanarahana trano sy trano ianao, na inona izany na inona-
Izany dia toy ny mahita heloka bevava federaly tena samihafa any.
Mba hahafantarana ny filàn'ny tovolahy, ny maha-zava-dehibe ny bandy lahy. Ny an'i Tom sy ny anao Dustin raha ny lafiny fandraharahana dia toy ny hoe ahoana no ahafahantsika mamarana ny asa any Amerika ary, ny fahalalam-pomba eto amintsika. Ahoana ny fomba izahay, ny fifanarahana nataonao ary inona koa. Tsy toa izany-
Eny, fifanarahana iray i Amerika. [inaudible 00:47:20] dia ny lalàm-panorenana, toa an'i Amerika tokoa no niteraka ity hevitra momba ny orinasa ity. Tsapako fa azonao atao ny mamantatra ireo orinasa miverina amin'ny orinasa Dutch East India. Fa natao ho an'ny Holandey, toa ny fantatrao, avy amin'ny foto-kevitry ny firenena izay orinasa iray ahafahan'ny orinasa sy ny fifanarahana hafa hotanterahina. Mbola tsy toy ny firenen-kafa nisy talohan'izay akory i Amerika.
Yeah. Ary mba hamerenana fotsiny ilay resadresaka nifanaovantsika tamin'ny fanjakana [tsy henoina 00:47:49], ankehitriny dia misy milaza fa ho mpanao heloka bevava izany ary ny fanjakana hafa kosa tsy ho meloka. Miteraka fikorontanana isan-karazany. Ny zavatra mbola tsy hitantsika tao amin'ny indostria dia toe-javatra iasan'ireto MSOs, Mpikirakira fanjakana marobe ireto. Tsy maintsy manana labozia samihafa sy SOP isan-karazany izy ireo amin'ny fanjakana tsirairay izay arahin'izy ireo. Tena tsy mahomby. Izany no mahatonga ahy mandray anjara betsaka amin'ny ASTM D37 izay fenitra manerantany ho an'ny indostrian'ny rongony. Ary mandra-pahatongantsika manana fenitra manerantany momba ny fomba tokony hitsapana ny vokatray, ny fomba tokony hametahana anarana azy ireo, ny fomba tokony fonosana azy ireo, ny fomba tokony hanariana azy ireo.
Mandra-pahatongantsika manana fomba mahazatra amin'ny fanaovana zavatra, ny indostria dia hitohy tsy hahomby loatra, ary ny vidin'ny fanaovana orinasa ho an'ireo orinasa rongony ireo dia tena avo lenta. Ary izany no mahatonga ahy mieritreritra ny sasany amin'ireo vidin'ny stock hitanao fa mitotongana no tiako holazaina amin'ny antony maro. Fa ny iray amin'izy ireo dia ara-drariny, tsy nisy afaka nahita mialoha ny fandoavam-bola tafahoatra amin'ny fanarahana tsotra ny fanjakana amin'ny fanjakana. Tsy afaka manana fotsiny ianao hoe: "Hey, ireto ny labelinay ary izao no fomba hivarotanay isaky ny fanjakana." Tsia, ny fanjakana tsirairay rehefa MSO ianao, mila manana ny marika tsirairay ny fanjakana tsirairay avy ary maminavina inona? Aleo ianao mijanona eo ambonin'ny fanovana ara-dalàna raha oharina amin'ireo marika ireo satria miova haingana be ny lalàna isaky ny fanjakana. Aza mandeha mividy marika 100,000 XNUMX satria afaka mamonjy denaria mpivady ianao satria mety hanova ny ampitso. Ka misy fanamby maro fotsiny.
Ie tsia. Satria ny fanjakana tsirairay dia fananany manokana. Ary avy eo dia tsy maintsy manana rojom-pivarotana ianao ary ny fantsom-pamokarana dia miankina amin'ny fanjakana. Satria ny vokatra rehetra dia tsy maintsy mitombo amin'ny fanjakana miavaka. Ka tsy azonao atao ny mahazo toekarena ara-toekarena raha oharina amin'ny hoe mpandraharaha interstate toa azonao atao ho an'ireo MSO ireo. Saingy avy eo ny azonao atao dia ny fandaniana lafo kokoa amin'ny fanaovana asa aman-draharaha, satria raha vao fantatry ny olona fa eo amin'ny lalao rongony ianao dia tsy maintsy miatrika ny vola rehetra ary manambola ny vidinao satria mihevitra izy ireo fa mahazo vola. manolotra totohondry.
Ary niresaka tany ambadiky ny sehatra izahay momba ny isa vitsivitsy ho an'ny mpamboly sy ny karazana cashflow azon'izy ireo atsipy. Ie, orinasam-bola izany, saingy orinasa lehibe sy vola. Ka satria afaka mamoaka vola be dia be izy io, tsy midika izany fa tsy lafo ny manao azy raha toa ka manana ny zony hanao izany ianao. Ary ireo rehetra ireo dia miteraka olana.
Fa ny iray amin'ireo zavatra tokony hiarahantsika miasa mandritra ny folo taona ho avy dia ny kaody ara-barotra fanamiana marijuana, na ny kaody ara-barotra rongony, na zavatra toy izany any amin'izay itondranao anao ary manara-penitra ireo. Satria io dia hitovy amin'ny lalàna hafa, toa ny ERA vao tonga tany amin'ny fanjakana faha-38. Lany tamin'ny taona 70, marina. Saingy efa azontsika izany, heveriko fa ny fanitsiana faha-25 izay nolaniana tamin'ny 1789. Saingy naharitra taona vitsivitsy lasa izay vao tena voasivana. Tsy haiko, tsy izaho no manam-pahaizana momba ny lalàm-panorenana, tsy mbola manam-pahaizana momba ny lalàm-panorenana aho.
Sekolin'ny lalàna no tsara kokoa noho ny lalàm-panorenana fa tsy izao aho.
Yeah. Satria ianao, tena nisy ifandraisany tamin'ny fiainanao izany. Fa tsy maninona. Ary izany no antony itiavako azy, satria olana manan-tantara izy io ary olana tsy mitovy amin'ny zavatra hafa ary manana fampiharana maro samihafa. Ka tsy ny fambolena, ny fanarahan-dalàna, ny orinasa fotsiny, fa mikasika ireo zavatra rehetra ireo ary mahavariana.
Ary ny iray amin'ireo zavatra tiako tadiaviko fotsiny dia ny niresaka momba ny ambany tany THC tany am-boalohany ary avy eo tsy fantatray… Tsy nanana voninkazo nifoka izahay ary novaina tamin'ny fivoriana mpanao lalàna lasa teo. Ankehitriny manana voninkazo azo setroka isika, ary holazaiko aminao fa ireo manana fahazoan-dàlana amin'izao fotoana izao dia tsy afaka mamokatra izany haingana-
… Nisy olona afaka naminavina ny fangatahana voninkazo. Ary faly ny rehetra momba ny rajako sy ireo zavatra hafa rehetra ireo, voninkazo-
Miggy, efa naminany izany ve ianao?
Zoky a, ka raha miresaka momba ny isa teo aloha ianao, dia azo vinavinaina daholo izany. Goavana ny tsenan'ny rongony. Ny zava-misy hoe nanomboka tamin'ny mpamokatra efatra ianareo, [tsy henoina 00:51:48] ny kolontsainareo, ny zavatra rehetra, ny zavatra iainan'ny mpanjifa. Fa izao dia manana olona maro ianao, maro karazana, manana traikefa bebe kokoa. Hivadika ho azy manokana io, azy manokana… Misy olona afaka manao hetsika. Misy olona iray izay ho… Toy ny zava-mitranga rehetra, toa ny miresaka amin'ny mpitatitra ianao sy ny hafa.
Izany no tena hevitra tsara indrindra ao dia ny famakiana vohana izay ahafahanao mahazo ireo orinasa mpanampy rehetra any. Saingy nilaza zavatra izay noheveriko fa nahaliana ianao, satria tsy mpisolovava Florida aho. Tsy mikasa ny hanao fanadinana bar any Florida aho. Ho hitantsika eo ny tohiny. Fa noho izany manao fanitsiana ny lalàm-panorenana ianareo ary avy eo manomboka manova izany ny mpanao lalàna? Satria nilaza ianao fa ilay fanitsiana dia nilaza hoe: “THC ambany, tsy misy voninkazo azo setroka.” Ary noho izany dia nesorin'izy ireo ny ambany THC sy ny endrika voninkazo azo setroka.
Ka ny THC ambany dia tamin'ny alàlan'ny lalàna alohan'ny fanitsiana ny lalàm-panorenana. Avy eo niditra ny fanitsiana ny lalàm-panorenana ary namela ny vokatra THC avo lenta. Ny lalàm-panorenana dia nangina raha ny amin'ny fifohana sigara, saingy tamin'ny alàlan'ny… Saingy nisy ny fitoriana napetraka ary tamin'ny alàlan'ny fitoriana, ny governora, raha ny marina, rehefa tonga ny governora, dia namoaka politika fa mpanohana marijuana mifoka sigara izy. Ary noho izany dia nanitsy ny lalàna izy ireo mba hamelana izany.
Nisy adihevitra lehibe momba ny fametrahana cap THC. Ary avy amin'ny zavatra azoko tamin'ity fivoriana fanaovan-dalàna manaraka ity, misy fanerena iray hafa hanandramana mametraka cap THC amin'ny programa marijuana ara-pitsaboana eto amintsika. Mazava ho azy fa izany no mahaliana amin'ny indostria. Miezaka mandroso hatrany izahay, fa mila miady foana mba hitazomana ny toerantsika. Ka amin'izao fotoana izao dia avela hanana marijuana fitsaboana THC any Florida izy ireo. Fa izany [crosstalk 00:53:38] -
Manana ny penina vape ve ianareo? Satria ity dia… Fahasoavan'ny natiora amin'ny fahasalamana, saingy mety ho 80% ny cannabinoids raha-
Ie, manana penina vape isika. Ny tsy ananantsika, noho izany mahaliana ny lalàna mamela ny hanina, fa ny Departemantan'ny Ag sy ny departemantan'ny fahasalamantsika dia tokony hiara-hiasa amin'ny lalàna fihinana ary tsy mbola nivoaka ny lalàna fihinana. Ka amin'izao fotoana izao any Florida dia tsy manana sakafo ara-tsakafo, heveriko fa… Mihevitra aho fa betsaka ny olona mankafy edibles ary mampalahelo fa tsy mahazo mampiasa edibles ny marary. Zavatra iray hafa mahaliana any Florida izay mbola andrasantsika ihany ny tsy naneken'izy ireo laboratoara fanandramana antoko fahatelo any Florida.
Ie, misolo tena ny Green Scientific Labs aho, izay iray amin'ireo laboratoara fanandramana voalohany eto Florida. Ary izy ireo, ny departemantan'ny fahasalamana dia tsy afaka namoaka ny fitsipiky ny fitsapana ny antoko fahatelo. Izao dia namoaka lalàna vonjy maika izay mbola tsy noraisina izy ireo izay hametraka… Ary amin'izao fotoana izao ireo laboratoara fanandramana an'ny antoko fahatelo, avelan'ny Sampan-draharahan'ny Fahasalamana hizaha marijuana ara-dalàna fotsiny izy ireo. Tsy misy fahazoan-dàlana ananan'ny laboratoara fitiliana an'ny antoko fahatelo, mila fifanarahana amin'ny MMTC fotsiny izy ireo, Ivon-toeram-pitsaboana marijuana ara-pahasalamana hahafahany manao izany fitsapana izany, izay mamorona olana isan-karazany. Ary tena marin-toetra, amin'izao fotoana izao any Florida, ny fitsapana dia voafehin-tena, izany hoe jereo, orinasa ireo ary raha tsy mila mizaha toetra izy ireo, raha afaka miantso ny azy ireo-
[crosstalk 00:55:05] mifehy tena, nifandray tamin'ny FAA ianao. Fa ho avy any Illinois koa io any amin'izay tsy ananan'izy ireo… Midika izany fa nilaza momba ny fitsapana izy ireo. Misy laboratoara fanandramana saingy tsy nisokatra ho an'ny laboratoara fanandramana vaovao izy ireo ary izany dia bebe kokoa amin'ilay orinasa mpanampy. Miezaka mametra ny fifantohana any amin'ny State Washington izy ireo, sa tsy izany?
Yeah. Yeah. Eny, misy mpanao lalàna sasany manery ny handoa volavolan-dalàna 10% sasany. Manantena izahay fa, ny tiako ho lazaina dia toy ny nolazainao ihany, dia tonga lavitra ianao ary mila miady amin'izay efa anananao.
Indrindra fa fomba [tsy henoina 00:55:37], tsy mijanona izany. Miverina izy io ary toy ny hoe, “Oh, oh, ampiasanao amin'ny endrika mifantoka be io?” "Eny."
Ny fanontaniana azoko apetraka dia ny hoe, “Fa maninona? Nahoana no zava-dehibe tampoka ny fetrantsika ireo fetra ireo? ”
Asehoy ahy [crosstalk 00:55:50] taiza no nokasihin'ity zavamaniry anao? Ny tiako tenenina dia inona marina no nataony taminao?
Yeah. Eny, nisy… Ary tao anatin'izay volana vitsy lasa izay dia nitondra olona marobe, dokotera marobe, mpilalao marobe ivelan'ny fanjakana manohitra rongony ary any Tallahassee dia betsaka ny mpandahateny izay mivoaka any. Ary izy ireo dia nanao seho fampahalalana sy fihainoana izay niresahan'ireo mpitsabo ireo ny loza ateraky ny fetra THC ambony. Ary holazaiko aminao fa niteraka fahatezerana be izany tamin'ny dokotera maro izay miara-miasa amiko. Ary fantatrao fa, manomboka manomboka manao fampahalalana manokana ry zareo izao, manazava ny antony maha-zava-dehibe ny fidirana amin'ny THC avo kokoa.
Ary marina izao, inona izao… Raha toa ka manao zavatra izay nampidirany ny vola THC ry zareo. Ny tena mahaliana dia ny karazan-ketsa rehetra sy ireo karazana biolojika rehetra izay amboleny ankehitriny na ho an'ny ankamaroany dia ho an'ny THC avo lenta, sa tsy izany? Ka raha tokony hiditra io lalàna io, raha ny tena izy, ny orinasan'i Florida dia tokony hamerina hanamboatra sy ny karazana karazana ary ny karazana sy izay rehetra ataony, izay mety hiteraka olana iray manontolo amin'ny fidiran'ny marary sy ireo karazana olana samihafa. Manantena aho fa-
Toa manandrana mametra ny haavon'ny THC ry zareo.
Inona ny valindrihana ambony indrindra ezahan'izy ireo ferana?
10% no noresahin'izy ireo.
Tsia, toy izany, raha nanana an'i Ethan Russo isika, Dr. Russo teny amin'ny habakabaka, dia ho toy ny hoe, "Tsia, rongony Chemovar ambaratonga rongony roa." Amin'ny heviny fa ireo no mahay mandanjalanja, satria manana ny tahan'ny 20 ka hatramin'ny iray ianao, izay mazàna ny hemp CBD anao, toy ireo soritr'aranao. Ary avy eo manana ny refy mifanohitra amin'izany ianao izay indraindray dia THC fotsiny ary mety ho toy ny lakaoly Gorilla anao izany. Ary avy eo raha nataonao toy ny mpitrandraka gorila izany dia tokony ho fifandanjana THC CBD mifandanja iray ihany izany. Ary na ireo aza dia mety mihoatra ny 10%, noho izany dia mbola mila mijery ny voninkazo ianao. Ary noho izany azonao, dia ho toy ny milaza fa mila mifidy paoma rehetra ianao izao rehefa tsy masaka.
Heveriko fa, hifoka fotsiny isika. Raha miresaka marijuana 10% THC bebe kokoa ianao dia hihinana marijuana bebe kokoa ary mety ho lasa avo kokoa aza. Nandany vola be fotsiny ianao. Ka handratra ny mpanjifa izany, ilay marary izay tsy maintsy mividy marijuana fanampiny vao hahatratra-
Mbola tsy misy trano fitomboan'ny marary any Florida, sa tsy izany?
Correct. Ny fitomboan'ny trano dia olana lehibe. Mazava ho azy fa ireo 22 fahazoan-dàlana dia heveriko fa mety handroso hanohitra izany. Ary ny mpisoloky 22 dia
Ho an'ny marary sa ho an'ny olon-dehibe?
Heveriko fa tsy mila maniry hipoitra trano mihitsy ireo manana fahazoan-dàlana 22.
Ie, jereo, tsy haiko. Saingy amin'ny faran'ny andro, ireto manana fahazoan-dàlana 22 ireto, toa ny nolazaiko, any Florida dia tsena goavana tokoa. Ireto manana fahazoan-dàlana 22 ireto dia manana vola be ao ambadik'izy ireo ary maro amin'ireo lobbyista any Tallahassee amin'izao fotoana izao no manao lobby ho azy ireo. Ka izany no iray amin'ireo sakana lehibe tokony tsy maintsy hialanao dia ny fanananao ireo mpiantoka fahazoan-dàlana 22 ireo handany vola be amin'ny fanaovana lobbying dolara amin'ny fitazonana ny trano hivoatra amin'ny [tsy heno 00:58:40]. Jereo izao, tsy haiko, mety hisy… Tsy mbola niresaka aho, tsy te-hiteny amin'ny anaran'ny mpiantoka fahazoan-dàlana rehetra. Angamba ny sasany amin'izy ireo dia manohana an'io. Saingy amin'ny fomba fijery misimisy kokoa, dia azo inoana fa haka karazana toerana manohitra ny lehibe an-trano izy ireo.
Fantatrao, very vola be ry zalahy amin'ny fanasongadinana fa ny fialamboly dia ho lasa dolara fizahan-tany ihany koa. Satria amin'izao fotoana izao dia miantoka 100% ny fitsaboana anao. Ny tiako holazaina dia mety tsy hisy ilay antsoin'izy ireo hoe fialantsasatra, avelao ny fanjakana, fa tsy izany. Saingy manome toky anao aho fa be dia be ny fividianana ara-pahasalamana ho an'ireo mponina eo an-toerana, ireo marary tsy mpitsabo. Ka raha vantany vao manana an'io fividianana fitsaboana io izy ireo ho an'ny fialamboly, na ny fividianana fialamboly dia hisintona ilay rangahy izay nisarika ilay antsoiny hoe tsena mainty ianao, fa ny sakaizanao no mpitsabo. Tsy mahazo an'io tsena io ianao ary miampy ny fizahantany. Toy ny nataonareo rangahy fa naharitra ny fizahan-tany, izany no iainanareo.
O, adala izany. Ny tiako holazaina dia izany no mahatonga ireo olona ireo mandany vola be amin'ny fahazoan-dàlana eto, sa tsy izany? Midika izany fa jereo fa tsy ataon'izy ireo ho an'ireo marary 300,000. Izy ireo dia manao izany ho an'ny olona 20 tapitrisa ananantsika, miampy ny fizahan-tany rehetra ananantsika. Ka tsy ry zalahy ireo… Tsy manana olona manao sonia fanamarinana $ 50 tapitrisa amin'ny tapa-taratasy iray fotsiny izahay satria mihevitra fa afaka mahazo marary 300,000 XNUMX. Ataon'izy ireo izany satria hitany fa rehefa miseho ny fialamboly eto Florida dia ho fotoana lehibe tokoa io. Ary tena marin-toetra fa ho lasa gangbusters izy io.
Hisy be, vola be azo. Hisy fifaninanana be dia be. Hainao ny tiako hambara? Jereo, amin'ny faran'ny andro, dia toy ny orinasa izany. Afaka mahay lehilahy ianao, hoy aho amin'ny olona maro, te-hiditra ao amin'ity orinasa ity izy ireo, heverin'izy ireo fa mora ny vola. Tsia, toy ny raharaham-barotra hafa izany. Tokony ho hendry ianao. Tokony hiara-hiasa amin'ireo olona mahalala izay ataony ianao, hiara-miasa amin'ireo mpisolovava marina, ireo mpitan-kaonty marina, olona ara-bola, mpampiasa vola ary tokony hifaninana ianao. Toy ny asa rehetra ihany. Tsy misy fomba mora hanaovana buck-
Tsara izany, afaka mamerina antsika amin'ny zavatra azontsika atao fonosana eto. Ka i Dustin, ho an'ny marijuana Florida amin'ny taona 2020, inona no hitanao fa mitranga?
Tsara, marijuana Florida amin'ny 2020? Ka amin'izao fotoana izao dia manana an'ity raharaha Fitsarana Tampony ity isika. Antsika koa io volavolan-dalàna noresahiko io dia ao amin'ny mpanao lalàna. Tsy hitako fa lany io volavolan-dalàna io. Manantena aho fa raha tsara izany, dia hiala voly isika eto. Tsy hitako fa lany io volavolan-dalàna io. Tsy hitako ny mpanao lalàna manao na inona na inona mandra-pitsaran'ny fitsarana tampony ao Florida. Ny tranga, ny raharaha Florida Grown. Io no orinasa nitondra izany ary antenaiko fa hanapa-kevitra momba izany ny Fitsarana Tampony ao anatin'ny volana vitsivitsy, amin'ny fiheverana fa nanamafy ny fitsarana ambaratonga voalohany izy ireo. Tsy maintsy miverina amin'ny fivoriana manokana ny mpanao lalàna. Tsy maintsy mamerina mamerina ny lalàna izy ireo. Fantatsika rehetra ny mety haharetan'ny fizotran'ny lalàna.
Avy eo ny DOH dia tsy maintsy mamoaka fitsipika vaovao ary avy eo ny DOH dia tsy maintsy mamoaka fangatahana. Ary avy eo hanomboka hanaiky ny fangatahana izy ireo. Noho izany, antenaiko tokoa fa mety hanana lisansa vitsivitsy navoaka tamin'ny taona 2020. Tena misalasala tokoa aho fa hanana fahazoan-dàlana navoaka tamin'ny taona 2020. Azo inoana fa tsy hisy lisansa fanampiny navoaka raha tsy amin'ny farafaharatsiny 2021 indrisy.
Fa manantena aho, ary izany no mahatonga ahy ho mavitrika be any amin'ny fanjakana hafa. Izany no antony niarahako niasa taminao tamin'ny sasany amin'ireo rindranasa Illinois. Mikasa ny hiara-miasa aminao amin'ny sasany amin'ireo rindranasa fanampiny azoko aho. Nahazo vondrona tany West Virginia aho. Nahazo vondrona miasa any Georgia izay miara-miasa amiko aho. Tena miara-miasa amin'ireo vondrona samihafa isan-karazany hanampiana azy ireo hiditra. Ary maro amin'izy ireo no orinasa monina any Florida izay mitady hanitatra any amin'ny fanjakana hafa koa, noho izany.
Fa be ny zavatra tokony hatao. Manantena aho fa, toy ny nolazaiko, ny lalànan'ny laboratoara fanandramana antoko fahatelo, manantena aho fa hivoaka. Manantena aho fa hisy ny fahazoan-dàlana amin'ny sasany amin'ireo laboratoara fanandramana antoko fahatelo mba hahafahan'ny… Ary miverina mihodina indray, miresaka momba ilay marary daholo izany. Tiako ny marary hahazo ny vokatra tsara indrindra mety ho azon'izy ireo. Ary raha tsy somary fehezin'ny tenanao ity vokatra ity momba ny fanandramana dia be ny risika mety hitranga fa ny sasany amin'ireo vokatra apetraka amin'ny tsena Florida ireo dia tsy voasedra tanteraka ary-
Handeha hitadidy iray fotsiny izy io na hisy olona lasa hazo tena izy. [crosstalk 01:02:36] Ka aiza no ahitan'ny olona anao lehilahy?
Hitan'izy ireo aho, ny orinasako dia www.mrcannabislaw.com, izany no M-Rcannabis law.com. Azonao atao ihany koa ny manaraka ahy amin'ny media sosialy rehetra ao amin'ny #mrcannabislaw.
Mahatalanjona. Tena misaotra anao aho tamin'ny fahatongavanao tamin'ny fandaharana [crosstalk 01:02:55]. Ary rehefa mamolavola zava-baovao i Florida, miangavy anao hiverina ary zarao amin'ny…
* Tom Howard ao amin'ny CannabisIndustryLawyer.com